Barnaamijka Gudbinta Isenselogic
Barnaamijka Diidmada SEO By Isenselogic.com
Isenselogic.com waxay bixisaa guddiyo deeqsi ah dhammaan gudbinta. Uma baahnid inaad wax iibis sameyso- kaliya nala soo xiriir hoggaanka ganacsiga oo u baahan naqshadeynta websaydhka ama adeegga nashqadeynta mashiinka raadinta waxaanan daryeeli doonnaa inta kale
Barnaamijkeena tixraaca wuxuu ku siinayaa adiga 15% macaamilka sanadka ugu horeeya.
Haddii uu jiro qandaraas meesha yaal, waxaan ku siin doonaa afka hore. Haddii kale, waxaan soo saari doonnaa lacagahaaga maadaama jeegagga ay bil walba soo galaan.
Tusaale ahaan, haddii gudbinta ay saxiixdo heshiis 6-bilood ah oo ah $ 3,000 bishii, taasi waa $ 2,700 jeeg lagaa sameeyay, horay. Mushaharkaaguna wuxuu gaari doonaa $ 3,600 haddii macmiilku go'aansado inuu sii wado adeegga wixii ka dambeeya qandaraaskooda hore, aqlabiyadda macaamiisheena ayaa sameeya Haddii kale, macmiilku wuxuu saxiixi karaa heshiis 12-bilood ah oo ah $ 5,000. Taasi waxay ka dhigan tahay $ 9,000 jeeg oo magacaagu ku qoran yahay!
Meelaha Laga Helo Gudbinta
Madadaalo iyo Daawooyin Marijuana ah
Xafiisyada Garyaqaanka iyo Dhakhaatiirta
Ganacsiyada qoyska ama asxaabta.
Macaamiishaada, ama macaamiisha shirkaddaada.
Iibiyeyaasha leh SEO iyo nuxurka gaar ahaan liita.
Ganacsi kasta oo Maxalli ah oo doonaya inuu noqdo bogga koowaad ee Google, waana intaas DHAMMAAN iyaga.
Hoggaamiyayaal ku habboon shirkaddaada.
Xidhiidh kasta oo ka faa'iideysan kara ujeeddooyin bartilmaameed bartilmaameed ah
Tilaabada 1: Saxiix heshiiskayaga barnaamijka beenta
Adeegso diiwaankayaga foomka leedhka ama la xiriir si aad ugala hadasho isbarasho diiran.
Talaabada 2: Tixraac Hogaaminta
Tilaabada 3: Lacag Bixi
Marka uu leedhka nala saxeexdo, lacag baa lagu siinayaa. Way fududahay.
Waxaan bixinaa qalab tababar si aan kaaga caawino inaad lacag badan hesho.
Ganacsi kasta oo ka jira magaalo kasta oo adduunka ka mid ah waa adiga iyo qoyskaaga il dhaqaale. Waxaad u isticmaali kartaa barnaamijkan haddii aad ka shaqeyso guriga ama dakhli dheeraad ah haddii aad shaqo leedahay.
Email Support@isenselogic.com oo wata magacaaga iyo lambarka taleefankaaga si aad u hesho nuqul ka mid ah heshiiska gudbinta iyo diyaar u ahaanshahaaga!
Waxaan haynaa tusaalooyin badan oo ah macaamiishayada hadda jira oo lagu xaqiijin karo.